Kedu ihe bụ ego mmefu ego kwesịrị ekwesị dị ka pasent nke ego ha na-enweta? | Martech Zone
Enwere oge ahụ erughị ala mgbe ụfọdụ ebe ụlọ ọrụ na-ajụ m ihe kpatara na ha anaghị enweta nlebara anya dị ka ndị asọmpi ha. Ọ bụ ezie na ọ ga-ekwe omume azụmaahịa ịchụ ndị na-asọ mpi n'ihi ngwaahịa ma ọ bụ ndị mmadụ ka elu, o yikarịrị ka ọ bụghị na ụlọ ọrụ nwere nnukwu ego na ahịa na ire ahịa ga-emeri. Ọbụna ngwaahịa dị elu na okwu ọnụ dị egwu enweghị ike imeri ahịa dị egwu.
Enwere uzo ato na iwu nke ire ahia dika onodu ego.
Ọdịdị ngwaahịa - ngwa ahia gi di nma nke na ndi ahia gi na ndi mgbasa ozi tinye oge na ike ha n’emebughi mmefu ego gi.
Njikọ Njikọ - kama ịkwụ ụgwọ maka ire ahịa, ị na-enye ndị ahịa gị onyinye nkwụghachi ụgwọ na-etinye oge na ike ha. Ọ bụ ezie na ọ bụghị ego, ọ bụ nbelata ego.
Ndị mmadụ - ikekwe ị nwere onye ndu a ma ama a na-agwa ka ọ kwuo okwu ebe niile, na-enye ohere mmekọrịta mmekọrịta ọha na eze na-enweghị ego mmefu ego dị mkpa. Ma ọ bụ ikekwe ị nwere ndị ọrụ na-egbu egbu na-arụpụta ihe ịgba ama dị egwu, nyocha, na mgbasa ozi mgbasa ozi nke na-eme ka uto.
Ka anyi kwuo eziokwu. Ezie na anyị na-agbasaghị ikwere na anyị nwere elu ngwaahịa na ndị mmadụ, ọ bụ mgbe na par na anyị asọmpi. N'okwu a, iwu metụtara. Inye ego n’ahịa dị ka pacenti ma ọ bụ ego ha ga enweta ga-abawanye ma ọ bụrụ n’olile anya ime ka ọganihu azụmahịa gị kwalite Gịnị bụ ebe ahụ dị ụtọ? Ihe omuma ihe omuma a sitere na Captora na enye ihe omuma:
46% nke ụlọ ọrụ na-emefu erughị 9% nke ego ha nwetara.
24% nke ụlọ ọrụ na-emefu 9 ka 13% nke ego ha nwetara.
30% nke ụlọ ọrụ na-emefu Karịrị 13% nke ego ha nwetara.
Nha ụlọ ọrụ nwekwara mmetụta dị ka nke ọma. Ndị ọrụ ụlọ ọrụ na-emefu ego 11% nke mmefu ego na nkezi ka obere ụlọ ọrụ na-emefu 9.2% nke mmefu ego. Ndị ụlọ ọrụ na-eme atụmatụ karia ndi ozo ha na etinye ego 13.6% nke ego ha nwetara ime otú ahụ.
Ihe niile gbasara ọnụọgụgụ, ndị na - ere ahịa na - anwa ịchọpụta ma ọ bụrụ na ha agam n’ihu n’ahịa ha. Site na itinye ego na itinye ego na teknụzụ iji chọpụta ihe ịga nke ọma na ịchọpụta mbọ gị, ịre ahịa na afọ dijitalụ nwere ike ịdị ka otu nnwale nnwale. Na ozi infographic a, Captora na-enyocha otu esi enweta mmefu ego kwesịrị ekwesị, na-akwado ngwa ọrụ kwesịrị ekwesị, dozie usoro ọchụchọ, ma nwalee ọdịnaya gị maka nsonaazụ kacha.
N'ezie, ụlọ ọrụ ọ bụla kwenyere na ha nwere ngwaahịa kachasị mma ma ọ bụ ndị mmadụ… yabụ ọrụ nke ime ka ha tinye aka na mmefu ego buru ibu na-abụkarị ihe ịma aka. Olileanya, nyocha a ga - enyere gị aka ka ị na - ahụ maka ijide òkè ahịa!
Tags: okpucaptora infographicisiokwu ogologoahia mmefu egoahia mmefu egomgbakọ na mwepụahịa metricsọnụ ọgụgụ nke KeywordsOnupasent nke ego ha nwetaraseo mmefu ego
Micro-Obere oge na Ahịa Journeys